Ngwaọrụ kachasị mma nke 2017, kedụ ngwaahịa nke afọ? | Akụkọ akụrụngwa
Ozugbo afọ gwụchara ma ọ nweghị ihe ijuanya gbasara akụkọ banyere ụwa nke teknụzụ, oge eruola ka ị gụọ ma chọpụta nke bụ ngwaọrụ kachasị mma ruru ahịa na afọ 2017. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara, yana , nke bụ ngwaahịa elektrọnik kacha njọ nke e gosipụtara na 2017, ana m akpọ gị òkù ka ị lelee isiokwu ebe m kwuru Ngwa kachasị njọ nke 2017.
N'ime afọ niile anyị bidoro, anyị ga-enwe ohere ịmara ngwaahịa na ngwaọrụ ọhụụ ga-abata ma nwee ọganiihu n'ahịa ahụ site na mmemme teknụzụ dị iche iche a na-eme n'ime afọ ahụ, bido na CES emere na Las Vegas. , na-esote MWC nke emere na Barcelona wee kwụsị IFA na Berlin. Mana mgbe ụbọchị ndị ahụ ruru, anyị ga-enyocha ihe kpatara ha jiri bụrụ ngwaọrụ kachasị mma nke 2017.
Nke mbụ, a ghaghị iburu n'uche na ụfọdụ ngwaọrụ anyị gosipụtara gị n'isiokwu a ewetabeghị naanị na otu n'ime teknụzụ teknụzụ ndị a, mana na onye nrụpụta emeela mmemme pụrụ iche iji kpọsaa ya, yabụ ọ bụ ọbụghị Anyị nọ na-echere ụdị ihe a, mana anyị anọla afọ niile na-echere ịhụ, lelee na ule nkà na ụzụ kachasị mma na nke kachasị njọ n'afọ gara aga.
2 Ihe ngosi ntaneti Amazon
3 Nintendo Gbanye
4 DJI esi
5 Super NES Omuma
7 8 Galaxy Note na Galaxy S8
9 Usoro Apple Watch 3 LTE
Agbanyeghị na Microsoft webatara Xbox One X n’etiti afọ, ọ bụ rue mbido ọnwa Nọvemba mgbe ọ kụrụ n’ahịa ma kemgbe ahụ ọ ghọrọla njikwa izizi mbụ n’ahịa nwere ike igwu egwuregwu na mkpebi 4k, n’enweghị mgbaka iji emomi dị ka a ga - asị na ọ na - eme na PlayStation 4 Pro. Xbox One X dị maka euro 499, euro 100 karịa Sony na asọmpi egwuregwu, PlayStation 4 Pro. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị TB nke nchekwa dị n'ime yana 4k UHD Blu-ihe ọkpụkpọ, ịghọ ezigbo ụlọ ọrụ mgbasa ozi maka ụlọ ọ bụla Onye chọrọ ịnụ ụtọ ọ bụghị naanị egwuregwu na mkpebi ha kachasị elu, kamakwa ụdị ọ bụla nke ọdịnaya ọdịyo.
Zụta Xbox One X na Amazon
Ihe ngosi ntaneti Amazon
Amazon bụ onye mbụ rụpụtara ịkụ nzọ n'usoro nke ndị na-ekwu okwu amamịghe ụlọ, nke na-enye anyị ohere ịmekọrịta ya site na iwu olu. Na 2014, ọ malitere Amazon Echo mbụ nke onye enyemaka Alexa nyere aka. Afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị na mgbe ọ gbasasịrị ụdị ngwaahịa a, ọ gosipụtara Amzaon Echo Show, ọkà okwu nwere ọgụgụ isi na-etinye na ihuenyo 7-inch, nke anyị na-enweghị ike kpọọ oku ma ọ bụ kpọọ vidiyo na ngwa Echo ndị ọzọ ma ọ bụ smartphones nwere ngwa arụnyere na ekwentị gị, mana anyị nwekwara ike ịme nyocha ngwa ngwa na ịntanetị, lelee vidiyo, kpọọ egwu, zụta ihe ...
Mgbe njedebe azụmahịa ikpeazụ nke ụlọ ọrụ Nintendo nke Japan nwere n'ụwa nke consoles, ụlọ ọrụ ahụ ejirila Nintendo Switch gbaa ụgbọ elu, ihe nlereanya nke ghọrọ ngwa ahịa kachasị ere ahịa n'ime afọ niile na anyị gwụchara ụbọchị ole na ole. gara aga, na-egosi ndị ọrụ na n'agbanyeghị ọdịda ndị gara aga, ndị na-eso ụlọ ọrụ ahụ etinyebeghị na akwa nhicha ahụ ma ka nwee olileanya.
Nintendo Switch na-enye anyị obere njikwa nwere ihu 6,2-inch, mana anyị nwekwara ike jikọọ na telivishọn anyị iji nwee ọ enjoyụ ọtụtụ egwuregwu dị ugbu a maka ngwaọrụ a, nke nkasi obi site na sofa n'ụlọ anyị. The Joy-Con, njikwa ndị dị n'akụkụ ngụgụ ahụ, anaghị agbasa ngwa ngwa ma bụrụ ndị njikwa na-achịkwa mgbe anyị chọrọ ịnụ egwu egwuregwu na TV, ebe ọ bụ njikwa 2-in-1 anyị nwere ike were ebe ọ bụla n’enweghị nsogbu.
Firmlọ ọrụ China DJI aghọwo ọ bụghị nanị ntụnye aka na ụwa nke drones, mana ọ ghọwo onye ndu na mpaghara ahụ, ịbụ onye na-emepụta ihe na-enye anyị ụdị kachasị, ha niile nwere ezigbo mma. DJI malitere n'afọ gara aga ụdị Spark, mini drone, nke na-ewepụ n'aka anyị, nke gụnyere teknụzụ na atụmatụ DJI niile Na mgbakwunye na nhọrọ ụgbọ elu nwere ọgụgụ isi, igwe na-eme ka igwe na-arụ ọrụ na igwefoto jikọtara ọnụ na-enwe ọmarịcha ogo nke anyị nwere ike iji mụbaa ihe okike anyị kachasị.
Mana ihe na-atọ ụtọ banyere mmiri a, anyị na-ahụ ya n'ụzọ na-achịkwa ya, ebe anyị nwere ike ime ya site mmegharị ahụ nke mere na ọ na-agba gbaa mgbe ọ na-elekwasị anya na anyị. The DJI Spark nwere ike ịchọpụta anyị ma soro ụzọ anyị, ma ọ na-eje ije, na-arị ugwu, na-agba ịnyịnya ígwè ... ịdekọ ihe ndị anyị na-eme n'èzí na-enweghị ihe ọ bụla nke ezinụlọ na-apụ n'ụgbọelu, na-enwe ike izere ihe mgbochi ndị nwere ike ịbịara. na ụzọ. Anyị nwekwara ike ịchịkwa ya site na ngwa smartphone nke na-enye anyị ọnụọgụ nhọrọ na ohere.
Zụta DJI Spark na Amazon
Super NES Omuma
Ihe omimi nke Super Nintendo console mere agadi mgbe emere ya na afọ gara aga SNES Classic na-abịa na egwuregwu 21 ochie dịka Super Mario World, The Legend of Zelda, Donkey Kong Country ... gbakwunyere egwuregwu a na-edeghị aha: Star Fox. egwuregwu na njikwa onwe ya na njikwa ekwe ka anyị cheta na oge anyị na-enwe ihe kasị mma console dị ka dwarfs nke ahụ dị na ahịa n'oge ahụ. N'agbanyeghị mgbalị Nintendo mere iji gbochie ire ere nke ịbụ ebe a na-azụkarị maka ndị kachasị ọrụ, dịka o mere n'afọ gara aga na Nintendo Classic, ọ gosipụtara ọzọ otu ọ na-atụghị anya na ahịa ahụ ga-adị elu, n'oge na-adịghịkwa anya mgbe o rutere n’ahịa ahụ agwụ agwụ.
Zụta SUPER NES Classic na Amazon
Companylọ ọrụ nke Cupertino aghọọla onye nrụpụta ọhụụ ka ọ nabata nkwalite teknụzụ nke rutere n'ahịa n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọ bụghị naanị na m na-ezo aka na ngwaọrụ na-enweghị ihe ọ bụla dịka iPhone X, mana m na-ekwu maka iji OLED mepere emepe, teknụzụ nke si n'aka onye kachasị asọmpi wee nye anyị ụdị onyonyo a hụbeghị mbụ. Otu iphone. Mana ọ bụrụ na iPhone X dị elu karịa asọmpi maka ihe, ọ bụ n'ihi njirimara njirimara dị na elu ihuenyo ahụ, taabụ ebe ihe mmetụta ndị na-eme ka ọrụ ahụ dị. akpọchi ọnụ anyị n'ihu anyị,, ebe Apple kpebiri na ihe mkpisiaka ihe mmetụta bụ akụkọ ihe mere eme na ọ dịghị na azụ nke ngwaọrụ ahụ.
Zụta iPhone X 64GB na Amazon
8 Galaxy Note na Galaxy S8
Samsung jisiri ike weghachite site na ọdịda nke Galaxy Note 7, ihe nlere na n'ihi nsogbu batrị na-emetụta ngwaọrụ ahụ, a manyere ya ịdọrọ ya n'ahịa. The Galaxy S8 na S8 +, egosiri na ngwụcha ọnwa Machị, bụ ndị ngwụcha izizi n’ahịa nwere okpokolo agba belatara ruo nke kachasị ma nwekwaa akụkụ n’akụkụ, nke na-aghọbeghị ntụnye aka n’ahịa ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ewepuwo nhọrọ nke ihuenyo dị n'akụkụ. Ihuenyo a na-enye anyị ihe ngosi dị egwu ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njedebe niile bụ ihuenyo na ebee akụkụ gbara gburugburu nwere ọrụ kwekọrọ na-enye ohere ịmepe ngwa site na nsọtụ otu ihe ahụ, iji nye ihe bara uru na ọnụ gbara gburugburu.
Zụta Samsung Galaxy S8 na Amazon
E gosipụtara ngosipụta nke Galaxy Note 8 na ngwụcha August, yana imepụta nke chetara anyị Galaxy S8 mana buru ibu, mana ejiri igwefoto abụọ yana ngwa anya ihe ngosi dị egwu nke kachasị mma ugbu a. ekwentị. Tụkwasị na nke ahụ, S-Pen bịarutere ọzọ n'ụzọ zuru ezu vitaminized, dị ka ọgbọ ọhụrụ ahụ ma na-enye anyị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọrụ ọhụrụ iji nwee ike inweta ihe kachasị na Nkọwa na ihe niile ọ na-anọchite anya ndị ahụ niile ọrụ ndị na-enweghị ike ime na-enweghị ọzọ ọnụ ndị ọzọ karịa Samsung Cheta.
Zụta Samsung Galaxy Note 8 na Amazon
Site na mmụba ama ama na onye bu ya ụzọ na ọnụ ala karịa Sony's A9 Alpha, nke ewepụtara Sony Alpha A7R III na nso nso a ọ bụ otu n'ime igwe ese foto kacha mma emere. Sony Alpha A7R III nwere mkpebi nke ihe atụ A9 ugboro abụọ, ọ nwere autofocus ugboro abụọ ọsọ ọsọ dị ka A7R II, ọ bụ ezie na ekwesiri ịmara na A9 na-enye agbapụ ngwa ngwa. Ọnụ ego dị ala na imewanyewanye arụmọrụ nwere ike ịbụ ihe zuru ezu iji masie ndị ọkachamara na ndị ọhụrụ novice.
Usoro Apple Watch 3 LTE
Agbanyeghị na Apple's Apple Watch Series 3 bụ usoro emelitere nke usoro 3, ọtụtụ ga - eche na ọ gaghị adị na ndepụta a. Ma ọ bụghị n'ezie. Naanị m na-eche na ụdị LTE, ihe nlere dị n'oge ahụ adịghị na Spain ma ọ bụ na mba ọ bụla ọzọ na-asụ Spanish, ọ bụrụ na ọ kwesịrị ịdị, ebe ọ na-enye anyị njikọta anyị na-achọ kwa ụbọchị na-enweghị ịbanye enwe mgbe niile anyị iPhone rapaara. Apple Watch Series 3 LTE na-enye anyị njikọ GPS, altimita na njikọ data LTE Nke anyị nwere ike ịpụ iji mee egwuregwu mgbe anyị na-ege Apple Music, na-enweghị dabere na iPhone. Ihe ọjọọ, dị ka ọ dị na mbụ n'ụdị ngwaọrụ a, bụ ndụ batrị, mana oge na nsụgharị ọhụrụ nke watchOS ọ ga-akawanye mma, dịka o mere na Samsung Gear S2 na S3 na njikọ LTE.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwaọrụ kachasị mma nke 2017